राजकिशोर रजक - | Nagarik News - Nepal Republic Media
राजकिशोर रजकका लेखहरु :
राजकिशोर रजक १६ श्रावण २०७७ शुक्रबार ६ मिनेट पाठ
जात–व्यवस्थाविरुद्ध किन भएन विद्रोह ?
जतिबेला संसार कोभिड–१९ महामारीवाट जुधिरहेको छ त्यतिबेला नै नेपालका सवर्ण समाज र सत्ता मनुवादी जातीय हिंसा, बलात्कार तथा हत्याको साक्षी बन्दैछ। भनिन्छ, आपत्ले समाजमा स्थापित मूल्य तथा मान्यतालाई हल्लाइदिँदोरहेछ तर उक्त भनाइ मनुवादमा आधारित अमानुस जाति–व्यवस्थाको मानसिकतालाई हल्लाउन सकेको छैन्।
राजकिशोर रजक २६ जेष्ठ २०७७ सोमबार ८ मिनेट पाठ
राजकिशोर रजक १९ जेष्ठ २०७७ सोमबार ८ मिनेट पाठ
वर्ण कसरी वंशानुगत भयो ?
नेपालमा वर्ण र जातको विषयमा जे/जति अध्ययन भएका छन् त्यो मूलभूतरूपमा सतही नै देखिन्छ। यस विषयमा ठूलो भ्रम छ। वर्ण र जातलाई पर्यायवाचीरूपमा बुझ्ने प्रचलन छ।
राजकिशोर रजक ३० वैशाख २०७७ मंगलबार १० मिनेट पाठ
सानो जोतको समस्यामा ‘अम्बेडकर डक्टरिन’
नोबल पुरस्कारद्वारा सम्मानित अमत्र्य सेनले भनेका छन्– यदि देशको पहिलो अर्थशास्त्री डा. अम्बेडकरले गरिबी निवारणका लागि आधारभूत काम नगरेका भए अथवा राष्ट्रिय विकासका बारेमा सापेक्ष दृष्टिकोण नदिएको भए मेरो सोधको केन्द्रमा गरिबी तथा कुपोषणको समस्या हुँदैनथ्यो ।
राजकिशोर रजक २ वैशाख २०७७ मंगलबार १५ मिनेट पाठ
माथिको श्लोकभारतीय संसद् भवनको भित्तामा लेखिएको छ। जसले भारतीय लोकतन्त्रको आधारभूतमूल्यको परिचय दिन्छ। त्यसकारण सन् २०१० मा अमेरिकाकातत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारतीय संसद्को संयुक्त सत्र सम्बोधन गर्दा उक्तश्लोकअंग्रेजीमा अनुवाद गर्दै उच्चारण गरेका थिए। ओबामालाई संस्कृत भाषाप्रतिकुनै लगाव थिएन,वास्तवमा उनले भारतीयलोकतन्त्र र भारतीय संविधानको आधारभूतमूल्यप्रतिगहिरो सम्मान प्रकट गरेका थिए।
राजकिशोर रजक १३ पुस २०७६ आइतबार ७ मिनेट पाठ
नेपालमा नारीवादी आन्दोलनलाई झट्ट हेर्दा बलियो र सक्रियजस्तो देखिन्छ । विकासको क्षेत्रमा महिला अधिकार, लैंगिक समानता, नारीवाद, पितृसत्ता आदि जस्ता विषयमा बहस, विचार गोष्ठी, तालिम, विमर्श दिनहुँ चलिरहेको देखिन्छ।
राजकिशोर रजक २९ फाल्गुन २०७५ बुधबार १५ मिनेट पाठ
नेपालका लागि राज्य समाजवाद
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ। सरकार चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराबाट समाजवादमा जाने नारा लगाउँदै छ। संसारमा समाजवादबारे एउटै बुझाइ छैन। अंग्रेजीमा ‘सोसलिज्म’ भनिने समाजवाद खासमा आधुनिक सिद्धान्त हो जसको पहिलो प्रयोग पश्चिमी समाजमा भएको छ। सम्भवतः ‘समाजवाद’ शब्दको प्रयोग पहिलोचोटि सन् १८२७ मा लेसेज–फेयर सिद्धान्तलाई खारिज गर्ने सन्दर्भमा भएको थियो।
राजकिशोर रजक १९ पुस २०७५ बिहीबार १४ मिनेट पाठ
गान्धी, अम्बेडकर र पुना प्याक्ट
हजारौँ वर्षदेखि आध्यात्मिक फासीवादी संस्कृतिबाट त्रस्त दलित/बहुजनको जीवन अन्धकार युगमा बितिरहेको थियो। सन् १९२० को आसपास दलित/बहुजनलाई बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्व प्राप्त भयो। सन् १९३० सम्म दलित/बहुजनको संघर्षलाई गान्धी र उनको दल कांग्रेसले अधिकतम उपेक्षा गरेको देखिन्छ। आधुनिक भारतको इतिहासमा १६ अगस्ट १९३२ दलित/बहुजनका लागि ऐतिहासिक दिन हो।
राजकिशोर रजक १३ मंसिर २०७५ बिहीबार १४ मिनेट पाठ
कार्य–आधारित लैंगिक भेदभाव दुनियाँभर छ तर हिन्दू ब्राह्मण व्यवस्थाले आफ्नो खास ‘आध्यात्मिक फासीवादी’ विचारधाराबाट लैंगिक विभेदलाई संस्थागत गरेको छ ।
राजकिशोर रजक १० आश्विन २०७५ बुधबार १३ मिनेट पाठ
कुनै पनि शब्दको प्रयोग निश्चित उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हुन्छ । समरसता शब्दको प्रयोग पनि त्यही निश्चित उद्देश्य अनुसार सवर्णहरूले गर्दै आइरहेका छन् ।
राजकिशोर रजक २७ श्रावण २०७५ आइतबार १२ मिनेट पाठ
रामायण सर्किटभित्र लुकेको राम–राज्यको राजनीति बुझ्न वर्चश्वको सिद्धान्तलाई बुझ्न जरुरी छ । वर्चश्व (हेजीमोनी) के हो ? कालिन्स समाजशास्त्रीय शब्दकोशअनुसार हेजीमोनीको अर्थ हो— एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि वैचारिक÷सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु ।
राजकिशोर रजक ७ जेष्ठ २०७५ सोमबार १२ मिनेट पाठ
जातव्यवस्था नदेख्ने राजनीति
नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले यहाँका विशिष्ट सामाजिक मुद्दालाई पक्रन सकेका छैनन् । मुख्य राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक विकासक्रम राणाशासन, संवैधानिक राजतन्त्र, पञ्चायत, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा केवल राजनीतिक परिवर्तन भए ।
राजकिशोर रजक २९ आश्विन २०७४ आइतबार ११ मिनेट पाठ
हाम्रो सन्दर्भमा बुद्ध र मार्क्स
पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई मार्क्सवादीले बुद्धलाई अध्ययन गरे अनि बुद्धका विचार आत्मसात गर्नसके भने उनीहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनसक्छ।
राजकिशोर रजक ८ जेष्ठ २०७४ सोमबार १६ मिनेट पाठ
राजकिशोर रजकका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्